Issuu: Qalab loogu talagalay Suuqgeynta, Maaha Keliya Joornaalada | Martech Zone
Issuu: Qalab loogu talagalay Suuqgeynta, Maahan Keliya Jariidadaha
Issuu waxaa badanaa lala xiriiriyaa warshadaha joornaalka hoyga internetka ee kobcaya, sii fududaanaysa majaladaha moodada, iyo kooxaha kale ee xiisaha gaarka ah leh. Laakiin Issuu, oo si fudud loo abuuri karo buugaagta flip PDF, waxay noqon kartaa aalad qiimo badan oo suuq geyn & horumarin ganacsi ah. At KA + A, sidaan usii wadno balaadhinta macmiilkeena, Issuu wuxuu noqday marin biyoodka si aan ula wadaagno shaqadeena dadyowga wadanka oo dhan.
Waxay ku bilaabantay buug faylalka loo yaqaan 'portfolio' oo aan qaabeynay kuna daabacnay qaybo yaryar iyadoo la adeegsanayo Iskuday (qalab kale oo weyn). Waxaan jeclaanay khibrada buugga - miisaankiisa gacmahaaga, bogagga jilicsan ee jilicsan, iyo daalacashada xilliga firaaqadaada. Markii aan bilownay daabacaadda, wadaagista iyo daabacaadda 'FedEx'ing' buugaagtan waddanka oo dhan, waxaan ogaanay inaan u baahannahay hab kale oo aan kula wadaagno waxyaabaha aan ka kooban nahay. Istaraatiijiyad daabacan oo nadiif ah ayaa xaddidan, ha ahaato kharash, fudayd cusboonaysiinta, ama waqtiga dirista. Waxaan dooneynay qaab aan ku gaarsiino khibrada buug, dalbashada.
Waxaan xalkayaga ka helnay Issuu, oo ah madal daabacaadda dhijitaalka ah taasoo noo suuragelisay inaan la wadaagno shaqadeena dhagaystayaal aad u ballaadhan welina aan soo bandhigno khibrad weyn. Issuu wuxuu hayaa qaar ka mid ah astaamaha si wanaagsan ugu habboon buuga jir ahaaneed (waa la quusin karaa waana la isticmaali karaa) wuxuuna ku buuxinayaa xoogagga barxad internet ah (deg deg loo wadaago, si fudud loo cusbooneysiiyo iyo qiime jaban). Soo-booqdeyaashu waxay suulka ka gali karaan nooc shaashad buuxda ah kitaabkeena khadka tooska ah (fiiri hoosta!), La wadaag boggaga (ama daabacaadda oo dhan) asxaabtooda iyo asxaabtooda. In kasta oo aan qirnay, way adag tahay in la beddelo saameynta nuqul buugga laga seexday habeen, inta badan dhacdooyinka, Issuu waa mid aad u waxtar badan oo ballaadhan - waana taas tan nagu sii haynaysa adeegsiga aaladda.
Furan daabic - Free daabacaadda - Summad badan
Tags: horumarinta ganacsigaContent SuuqdigitalissuumarketingPublishing
Janneane waa Maamulaha Mashruuca & Bulshada ee kooxda cajiibka ah KA + A, halkaas oo ay ku qaabeeyaan noocyo iyo waayo-aragnimo shirkadaha tiknoolajiyadda koritaanka sare leh. Iyadu sidoo kale waa aasaasihii IndySpectator, hage e-warside habab cusub oo lagu jeclaado Indy, iyo blog walaasheed, Bilaabe Bilaabe, oo loogu talagalay goobta bilowga maxalliga ah. Dhawaan Janneane wuxuu ka shaqeynayay sidii uu u kobcin lahaa bulshada moodada ah ee Indy Qaabka, Kulan bille ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka xiiseynaya moodada.
Safarka Emailka ee Inbox-ka
Kaliya waxaan la hadlayey macmiil maanta waxaanan la wadaagay qoraalkan, Janneane. Waxay ku daabacaan tan oo ah buug-yareyaal aad u tayo sarreeya khadadka wax soo saarkooda. Tani waxay noqoneysaa hab ku habboon in lala wadaago buug-yarahaas si dijitaal ah dhagaystayaashooda. Waad ku mahadsantahay qoraalkan - runtii farsamada weyn waxaanan jeclahay KA + Buug-yaraha… Waxaan rajeynayaa maalinta aan la shaqeyn karo kooxdaada si aan si wanaagsan u hagaajiyo sumadeena!